April 29, 2011 at 3:05 pm2comments	အကျင့်ဆိုး -ရွှေတိုင်ညွန့် အလုပ်လုပ်ရာဝယ် အစကသာရယ်အဆုံးထိပင် မကြံချင်တယ် အားလျှော့ကာရယ် ပေါ့လျှော့တာရယ် အဲဒါအကျင့်ဆိုးတယ် တစ်ယောက်ကဒီလို တစ်ယောက်က ဟိုလို အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ ဂုဏ်ပြိုင်တယ် နည်းလမ်းအပိုတွေ စည်းကမ်းမရိုသေ ရက်တွေကုန်ခဲ့တယ် ဒီလိုအကျင့်ဆိုးမျိုးထားလို့ သံသရာရှည်လာတယ် မြန်မာပြည်မှာတကယ် ကောင်းအောင် အထူးမနေကာရွယ် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးပြောသမျှ နာခံမယ်
April 24 ကစာပေဟောပြောပွဲမှာ ဆရာချစ်ဦးညို ဆိုသွားတဲ့ အကျင့်ဆိုး ဆိုတဲ့ သီချင်းစာသားပါ။ သီချင်းကို ဒီမှာနားထောင်လို့ရပါတယ်လို့ ဘလော့လာဖတ်သူတစ်ဦးရဲ့ ကူညီမှုအရသိရပါတယ်။ သီချင်းစာသားကို ဖတ်ရတာနဲ့ တင် တွေးစရာလေးတွေများသား။ ရွှေတိုင်ညွန့် နှစ်တစ်ရာပြည့်စာအုပ် မှာ ဒီသီချင်းကို ရှာရင်း အခြားသီချင်းတွေ ဖတ်မိတော့ စာဆိုရှင်ရဲ့ မြန်မာပြည်ပေါ်မှာထားတဲ့ စေတနာ၊မျှော်လင့်ချက်တွေကို ထင်ထင်ရှားရှားမြင်နိုင်တယ်လို့ ခံစားမိတယ်။ မျှော်လင့်ခဲ့သလိုမဖြစ်ခဲ့တာကတော့ ..၀မ်းနည်းစရာပဲပေါ့လေ။ Share this:FacebookLike this:Like Loading...
Entry filed under: သီချင်းများ, Sharing. Tags: .	ပိုစွဲလမ်းရတဲ့သူ ကိုယ်ပဲဖြစ်ပါရစေ	A sketch of Bilat Pyan Than , from “Perfect Hostage”	2 Comments Add your own
Dr.Nay Oo | May 5, 2011 at 1:34 am
Ma Shwe Mi | May 5, 2011 at 3:21 pm